ဘိုးအင်း 767-300ER ပိုလနျ Air လေကြောင်းလိုင်း-လိုင်း FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 41.3 ကို MB
downloads ရယူရန္ 15 686
Author: Project မှ OpenSky, ဂျင်မီ Richards တို့က 2d panel က
ဘိုးအင်း 767-300 အရည်အသွေးမြင့်မားတာအရောင်များ, ဒီ add-on ကောင်းတစ်ဦးဂရပ်ဖစ် configuration ကိုလိုအပ်သည်။ 3D မော်ဒယ်အသေးစိတ်အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ FMC အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် Hard-မျှတည်ထားပါဘို့ 2D panel ကအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ FS2004 များအတွက်မဖြစ်မနေ!
အဆိုပါ Lotnicze တာ Polskie Linie (အင်္ဂလိပ်စာရေးပိုလနျလေကြောင်းလိုင်း) (IATA: ol ICAO ကုဒ်: တာ) ပိုလန်၏အမျိုးသားရေးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1 ဇန်နဝါရီလ 1929 အပေါ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အသုံးပြုတဲ့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်တင် Junkers F13 (15 မိတ္တူ) နှင့် Fokker F.Vlla / 1m (6 မိတ္တူ) တို့ဖြစ်သည်။
တာ 2003 အတွက်လေကြောင်းလိုင်းမဟာမိတ်စတားမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်ပိုလန်အတွက်ပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်လုပ်ငန်းခွဲ EuroLOT ရှိပါတယ်။
အဆိုပါဘိုးအင်း 767 အမေရိကန်ကုမ္ပဏီဘိုးအင်းကထုတ်လုပ်မယ့်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်လေယာဉ်အမျိုးအစားရှည်လျားသောခရီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ် 26 စက်တင်ဘာလ 1981 ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အ 767 ခရီးသည်များ၏ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဗားရှင်း 181 နှင့် 375 လူအကြားသယ်နိုင်ပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းအယူနစ်၏ဗားရှင်းနှင့် configuration ပေါ် မူတည်. 9400 မှ 12 200 ကီလိုမီတာမှကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါဘိုးအင်း 767 သုံးကွဲပြားခြားနားသောလေယာဉ်ကိုယ်ထည်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို 767-200, ပထမဦးဆုံး 1982 အတွက် 767-300 နှင့် 1986 အတွက် 767-400ER အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, 2000 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ ဘိုးအင်းလည်းဗားရှင်းဖွံ့ဖြိုးကြီးမြတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား payload နှင့်တကွ, -200 နှင့် -300 ဗားရှင်းအဘို့ (ER) "Range တိုးချဲ့" ဖြစ်ပါတယ်။ 1995 ခုနှစ်, ဘိုးအင်းအ 767-300F, လုံးဝတစ်ဦးကုန်တင် version ကိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်။ အခြားကုန်တင်ဗားရှင်းလည်းတည်ရှိနေပေမယ့်ကူးပြောင်းခဲ့ကြသော 767 ၏ခရီးသည်ဗားရှင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ 767 Single-တန်းမှာလေယာဉ်ဘိုးအင်း 757 နှင့်အတူယှဉ်ဖောက်မဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းအဆင့်နှင့်လေယာဉ်မှူးအခန်းမှာနှစ်ဦးစလုံးလေယာဉ်ရှယ်ယာအများအပြားဒြပ်စင်။ အဆိုပါဘိုးအင်း 767 လေယာဉ်အင်ဂျင်နီယာ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို၏အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရာနှစ်ခုသာလေယာဉ်မှူးများ၏ပါဝင်သည်ဟုလေယာဉ်အမှုထမ်းနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုသို့ဝင်ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အ 1990s ခုနှစ်, ဘိုးအင်း 767 အများဆုံးရှည်ခရီးရှည်သွားလေယာဉ်ပျံများအတွက်အသုံးပြုတဲ့လေယာဉ်ဖြစ်လာပြီးအများဆုံးအမေရိကန်နှင့်ဥရောပအကြားအရောင်းအဝယ်ပျံသန်းမှုများအတွက်လေကြောင်းလိုင်းများကအသုံးပြုခဲ့သည်။ 2009 ခုနှစ်, ဘိုးအင်း 767 များအတွက်စုစုပေါင်းအမိန့်, ရှိသမျှဗားရှင်း, 1000 လေယာဉ်ပျံကိုအပ်ခဲ့ကြသဖြင့်, ပဲ 900 အုပ်ရ၏။ ဘိုးအင်း 300 ၏ -300 / -767ER မော်ဒယ်စုစုပေါင်းအမိန့်နီးပါးသုံးပုံနှစ်ပုံနှင့်အတူ, ဒီလေယာဉ်ပျံ၏လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2009 ခုနှစ်, 864 ဘိုးအင်း 767 ဝန်ဆောင်မှု 48 လေကြောင်းလိုင်းများအကြားဖြန့်ဝေ, ရှိကြ၏။
စက်တင်ဘာလ 11, 2001, ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာများ၏အမွှာတာဝါတိုင်သို့ပျက်ကျခဲ့သည်ဟုနယူးယောက်, နှစ်ဦးဘိုးအင်း 767 အတွက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ၏နေ့။ (ရင်းမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား)